Hamerina ny tsingerin'ny torimasoko ve ny fijanonana mandritra ny alina - BikeHike
Ahoana no hamerenako ny tsingerin'ny torimasoko mandritra ny alina?
Tokony hiari-tory fotsiny ve aho raha tsy mahita tory?
Mety hanimba ny fandaharam-patorianao ve ny indray alina?
Afaka manamboatra ny fandaharam-patorianao ve ny misintona ny alina manontolo?
Ahoana no hanafoanana ny tsingerin'ny torimaso ratsy?
Ratsy ve ny matory adiny 4 isaky ny alina?
Moa ve atao hoe fitsaharana ny mandry mikimpy?
Hafiriana no sitrana amin'ny alina manontolo?
Afaka mamerina ny tsingerin'ny torimaso ve ny melatonin?
Ahoana no hamerenako ny famantaranandron'ny vatako?
Ratsy ve ny alina rehetra?
Tokony hiari-tory mandritra ny andro ve ianao mba handaminana ny fandaharam-potoan'ny torimaso?
Ahoana no fomba handaminana ny tenako amin'ny torimaso mandritra ny alina?
Normal ve ny mifoha isaky ny 2 ora?
Ahoana no hanapahako ny tsingerin'ny fifohazana aloha loatra?
Nahoana aho no mifoha isaky ny alina amin'ny 3 ora maraina?
Adiny firy no matory i Elon Musk?
Ahoana no ahafahako matory adiny 8 ao anatin'ny adiny 2?
Tsara kokoa ve ny torimaso adiny 5 noho ny tsy misy?
Torohevitra 10 hamerenana ny fandaharam-potoananao hatoriana Ampifanaraho ny fotoana hatorianao, fa mahareta. Aza matory, na dia reraka aza ianao. Aza matory, ary mifohaza amin'ny fotoana mitovy isan'andro. Aoka ianao ho hentitra amin'ny fanarahana ny fandaharam-potoan'ny torimasonao. Halaviro ny hazavana alohan'ny hatory. Fadio ny mihinana na manao fanatanjahan-tena akaiky loatra ny fotoana hatoriana.
Raha tsy matory ianao, dia hiharatsy ny torimasonao mandra-pahavitan'ny fialan-tsasatra. Ny torimaso mandritra ny adiny 1 ka hatramin'ny 2 dia mety hampihena ny tsindry amin'ny torimaso ary hahatonga anao tsy ho reraka amin'ny maraina raha oharina amin'ny torimasonao mandritra ny alina.
Aorian'ny alina tsy milamina dia mieritreritra ny olona fa afaka manonitra ny torimaso very izy ireo amin'ny fatoriana aloha sy ny torimaso ny ampitso. Azo antoka fa manampy ny olona hahatsapa fitsaharana izany, fa ny fanadihadiana vaovao iray dia nahita fa ny tsy fahampian-torimaso iray alina fotsiny dia misy fiantraikany ratsy amin'ny metabolisma sy ny famantaranandro biolojika sela.
Ny faribolana maizimaizina, ny kitapo eo ambanin'ny maso, ny fikohaka tsy an-kijanona, ary ny ady amin'ny fihazonana ny masonao dia azo antenaina rehefa misintona ny alina ianao mba hanitsiana ny fandaharam-potoan'ny torimasonao. Saingy, ankoatra ny fiantraikany miharihary sy fohy amin'ny vatanao, ny fijanonana mandritra ny alina dia mety hisy fiantraikany maharitra eo amin'ny vatanao.
Eto izahay dia hanazava ny fomba sasany hamerenana ny fandaharam-potoan'ny torimasonao raha tsapanao fa tsy mandeha ny gadonao. Jereo ny hazavana maraina. Manaova fanatanjahan-tena in-3-4 isan-kerinandro. Ahitsio miadana ny fandaharam-potoananao. Halaviro ny hazavana manga alohan'ny hatory. Aza maka Naps. Fadio ny misakafo alohan'ny hatory. Manaova fanazaran-tena mampitony alohan'ny hatoriana. Manaova dia lasy.
Ny olona izay matory latsaky ny adiny 7 ka hatramin'ny 8 isan'alina dia mety hijaly noho ny aretina mitaiza toy ny aretim-po, ny matavy loatra, ny fahaketrahana, ny diabeta ary na ny dementia aza, hoy i Fu sy ny manam-pahaizana hafa.
Na dia tsy manomboka ny tsingerin'ny REM aza ny miala sasatra amin'ny masonao mihidy ary mamela anao hatory ao anatin'ny fotoana fohy, dia mbola manome tombony be dia be izany. Ny manakimpy ny masonao dia mampitony ny sainao ary mampitony ny hozatrao sy ny taova. Maro no miantso azy io ho "fifohazana mangina".
Tsara ihany koa ny miala sasatra 7 na 8 ora isaky ny alina. Hanampy ny vatanao hiverina amin'ny fandaharam-potoana izany. Mety haharitra andro na herinandro vao sitrana amin'ny tsy fahampian-torimaso. Matory adiny 1 monja dia mila 4 andro vao sitrana.
Ny porofo avy amin'ny fikarohana fikarohana kely dia manondro fa ny fanampin'ny melatonin dia mety hanampy amin'ny famerenana ny tsingerin'ny torimaso sy ny fifohazana. 7ary manatsara ny torimaso amin'ny olona manana jet lag. Mpiasa mifindrafindra - olona miasa amin'ny alina - matetika miady amin'ny fahasahiranana amin'ny torimaso mifandraika amin'ny gadona circadian tsy mifanaraka.
Ireto ambany ireto misy torohevitra mahasoa hanampy anao hamerina ny famantaranandro vatanao sy hankafizanao ny shuteye. Fadio ny jiro manga amin'ny alina. Tantano ny torimasonao. Aza mandry am-pandriana mifoha. Mametraha fanairana. Amboary ny tontolo iainana mety. Fadio ny kafe. Manaova fanatanjahan-tena isan'andro. Ataovy fahazarana ny tenanao.
Ratsy ho an'ny fahasalamanao ara-batana ny fijanonana mandritra ny alina satria tsy ampy torimaso ilaina izany. Ny tsy fahampian'ny torimaso sy ny alina rehetra dia mety hampihena ny fanoherana ny aretina sy ny aretina. Ny torimaso ratsy sy ny tsy fahampian-torimaso dia mampitombo ny mety hisian'ny (3): fiakaran'ny tosidrà.
Misafidiana fotoana hatoriana sy fotoana hifohazana. Mifikitra amin'ireo fotoana ireo isan'andro, na dia amin'ny faran'ny herinandro na andro tsy fiasana. Miezaha tsy hifoha na hatory mandritra ny adiny iray na roa mahery. Amin'ny fanarahana fandaharam-potoana mahazatra, ny famantaranandro anatiny dia afaka mamorona fomba fanao vaovao.
Raha tsy maintsy miari-tory mandritra ny alina ianao, dia afaka manampy anao hanao izany soa aman-tsara ireto torohevitra manaraka ireto. Fanao. Ny fomba tsotra indrindra hifohazana mandritra ny alina dia ny famerenana ny famantaranandro anatiny. Kafeina. Fa halaviro ny zava-pisotro misy angovo. Matory atoandro. Mitsangàna ary mihetsiketsika. Mitadiava jiro mamiratra. Ampiasao ny fitaovanao. Mandro.
Ny ankamaroantsika dia mifoha intelo na inefatra mandritra ny alina noho ny antony samihafa, ary heverina ho anisan'ny fomba torimaso mahazatra izany. Na izany aza, maro amintsika no mifoha matetika kokoa, indraindray aza isaky ny adiny roa na telo amin'ny alina. Antony mampiahiahy izany.
Ahoana no hampitsaharana ny mifoha aloha loatra manao fanatanjahan-tena tsy tapaka. Misoroka kafeinina sy zavatra hafa manaitaitra aorian'ny tolakandro (1 na 2 ora tolakandro) manakana ny hazavana ao amin'ny efitranonao ary mitazona azy mangina, maizina ary mahazo aina. mandrakotra ny fampiratiana amin'ny famantaranandronao sy ny jiro kely (na mamiratra) ao amin'ny efitrano.
Raha mifoha amin'ny 3 ora maraina na amin'ny fotoana hafa ianao ka tsy afaka matory avy hatrany, dia mety ho noho ny antony maro izany. Anisan'izany ny tsingerin'ny torimaso maivana, ny adin-tsaina, na ny toe-pahasalamana. Ny fifohazanao amin'ny 3 maraina dia mety hitranga matetika ary tsy misy dikany, fa ny alina tsy tapaka toy izany dia mety ho famantarana ny tsy fahitan-tory.
Tamin'ny fisehoana vao haingana tao amin'ny podcast The Joe Rogan Experience, nilaza i Elon Musk fa matory adiny enina eo ho eo isan'alina izy–raha tsy maintsy atao, raha tsy izany dia hijaly ny asany. Io fieken'ny Musk entin'ny angon-drakitra io dia tokony horaisin'ny mpanorina na mpitantana orinasa miasa be loatra.
Na izany aza, ireto teknika manaraka ireto dia mety hanampy anao handalo fotoana fohy amin'ny tsy fahampian-torimaso. Manaova fanatanjahan-tena maivana. Halaviro ny fotoana amin'ny efijery mandritra ny adiny iray alohan'ny hatory. Esory ivelan'ny efitrano fatorianao ny efijery sy ny zavatra hafa manelingelina. Ataovy azo antoka fa maizina ny efitranonao. Ahena ny fihinanana kafeinina. Mihinàna sakafo ara-pahasalamana. Halaviro ny toaka.
Indraindray dia miantso ny fiainana ka tsy ampy torimaso. Saingy tsy ampy ny torimaso adiny dimy ao anatin'ny 24 ora, indrindra amin'ny fotoana maharitra. Araka ny fanadihadiana natao tamin'ny taona 2018 tamin'ny olona 10,000 mahery, dia mihena ny fahafahan'ny vatana miasa raha tsy ao anatin'ny adiny fito ka hatramin'ny adiny valo ny torimaso.
Mamerina ny tsingerin'ny torimasonao ve ny fijanonana mandritra ny alina
Valiny haingana: Mamerina ny tsingerin'ny torimasoko ve ny fijanonana
Mety hamerina ny tsingerin'ny torimasonao ve ny fijanonana rehetra
Fanontaniana: Ahoana ny famerenana ny tsingerin'ny torimaso ao anatin'ny alina iray
Fanontaniana: Ahoana ny fomba hamerenana ho azy ny tsingerin'ny torimasonao ao anatin'ny alina iray
Afaka mamerina ny tsingerin'ny torimaso ve ny Xanax
Fanontaniana: Afaka mamerina ny tsingerin'ny torimaso ve ny Melatonin
Valiny haingana: Azonao atao ve ny mamerina ny tsingerin'ny torimasonao
Fanontaniana: Avereno ve ny torimasonao?
Mamerina ny tsingerin'ny torimasonao ve ny fifadian-kanina
Fanontaniana: Hafiriana ny hamerenana ny tsingerin'ny torimaso
Fanontaniana: Ahoana ny famerenana haingana ny tsingerin'ny torimaso